China Cement dumbbell ndị na -emepụta ya na ndị na -ebubata ya Meiao
Ụlọ ọrụ anyị abụghị naanị na-emepụta akụrụngwa egwuregwu dị elu, kamakwa maka ahịa dị ala, anyị nwere ngwaahịa dabara ha. Dumbbell ciment a bụ ngwaahịa ọhụrụ anyị, nke na -adị mma na gburugburu ebe obibi. Ihe e mesiri ike bụ na ọnụahịa dịkwa ọnụ ala, yabụ na ọ na -ewu ewu na ndị ahịa
Ihe gbasara ya, a chọrọ efere dumbbell a ka ọ buru ụzọ mee shei plastik. Mpekere dumbbell ọ bụla ga -enwe obere oghere na ala nke enwere ike mepee. Mgbe e mechara shei efere plastik ahụ, anyị na -awụnye simenti ahụ n'ime rọba plastik ahụ site na oghere ndị ahụ. Mgbe anyị juputara na -ejuputa, dochie mkpuchi ahụ ọzọ na efere dumbbell adịla njikere. Ogwe dumbbell bụ plastik gbara gburugburu ọkpọkọ ígwè. Na nut bụ plastik. Ị nwere ike iche na ọ naghị esiri ike n'ihi na ejiri plastik mee ya, mana echegbula n'ezie, a nwalere anyị niile, ọ siri ike yana nchekwa. Na plastik niile anyị na -eji eme ihe adịghị mma na gburugburu ebe obibi, ọ gaghị emerụ ahụ ike anyị.
Banyere nkọwapụta, anyị nwere 10-15-20-25-25-30-40-50KG. Mpempe igwe simenti anyị mepụtara na mbụ bụ efere dumbbell gburugburu. Ka emechara ihe ọhụrụ na mgbanwe, anyị gbakwunyere dumbbells nke octagon, nke na -adị mma karịa ma kwụsie ike na ala. Ọtụtụ ndị ahịa na -amasị ha nke ukwuu. A nwekwara ike iji dumbbells simenti anyị site na iji mkpanaka njikọ. Mgbe anyị anaghị eji mkpanaka njikọ, ha bụ dumbbells. Mgbe anyị gbakwunyere mkpanaka njikọ, dumbbell ga -abụ mgbịrịgba. Maka ịdị mma nke ndị ahịa iburu, anyị na -emepụtakwa dumbbells set, nke bụ igbe plastik nke nha kwesịrị ekwesị. Ị nwere ike itinye otu dumbbells n'ime igbe ahụ kpamkpam, nke dị mfe iburu.
Banyere nkwakọ ngwaahịa: anyị na -etinye dumbbell n'ime katọn, n'ikpeazụ tinye ya na pallet. Pallet bụ usoro nkwakọ ngwaahịa a na -ejikarị na mbupu, ọ bụkwa ya bụ nchekwa kacha mma maka ngwaahịa a, yabụ na ọ dịghị mkpa ichegbu onwe gị maka ngwaahịa a ga -emebi. Anyị ga -agbakọtakwa ọtụtụ ihe mkpuchi ihe nkiri na mpụga pallet.
Nabata ka ị zụta mgbịrịgba ciment anyị, anyị ga -enye gị ọnụ ala, yana enwere ọtụtụ ụdị ọhụụ maka ịhọrọ.
Nke gara aga: Meiao Fitness nwere kettle mgbịrịgba SET
Osote: 50KG Chrome/Ihe osise Cast Iron Barbell setịpụrụ
40cm 2.5cm na dayameta Chromed steel knurling d ...
Obere ụlọ mgbatị ọzụzụ mmeghari plastic cem ...
New mbata ngwaahịa equipments mgbatị igwe ...
N'ogbe New Price sere nkedo ígwè adjustab ...
Mgbatị mgbatị Black isi awọ sere ...
New ụdị omenala arọ Lifting kemeghi plast ...